ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းအင်နာလော့ clock | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းအင်နာလော့ clock
ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းအင်နာလော့ clock APK ကို
သင့်ရဲ့ screen ကိုများစွာသောအခြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများထက်ဖော်ရွေထက်ပိုဘက်ထရီသောအဆင်းလှသော Analog စနာရီနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်အချိန်သင့်ရဲ့ screen ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ! ဝေမျှမယ်အပေါ်အခါလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုကြည့်ပါက,
♦နောက်ခံသမိုင်း5ကွဲပြားခြားနားသောသူတို့သညျ
♦စက္ကန့်သည် Modes arrow: စီးဆင်းသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူ, လူမိုက်ကံကောင်း (အပြည့်အဝဗားရှင်း!)
♦လျင်မြန်စွာ settings ကို
♦ Wallpaper ဖုန်းများနှင့် tablet များ (ရှုခင်းနှင့်ပုံတူ orientation ကို) ထောကျပံ့
- စက္ကန့်နှင့်အတူနာရီ၏ Redrawing ဒုတိယနှုန်းအများဆုံးတစ်ကြိမ် enabled မြှား (စက္ကန့်ကို tick mode မှာ arrow, ဤကိစ္စတွင်အတွက် FPS န့်သတ်ချက်မှသာအချိန်ကို update ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှအကျိုးသက်ရောက်) နှင့်တစ်မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကိုပိတ်ထားရသည့်အခါ။
♦ OpenGL ES 2.0 လိုအပ်သော
တစ်ဦးနောက်ခံအဖြစ်♦ Added အရောင်ရွေးချယ်ရေး
အချို့သော clockfaces နှင့်မြှား၏♦တညျ့ပုံရိပ်တွေ
အပြည့်အဝဗားရှင်းမှာတော့♦ clockface "ကြက်" ကဆက်ပြောသည်
အချိန်ချွေတာ♦ Fixed မိုဃ်းလင်း
♦ Added အချိန် clockface
ထုတ်ကုန်အချို့ကိုအပေါ်♦ Fixed clockfaces အမှား
♦ Fixed positioning ကို
အနက်ရောင်နှင့် default အ clockfaces ၏♦ Fixed "အနီရောင်အနား"
♦ Added နှိုးဆော်သံစတင် option ကို
8.07 ကို MB